के हामी आईओएस १ in मा आईफोनका लागि पुन: डिजाइन मल्टिटास्किंग देख्नेछौं? | आईफोन समाचार
परी गोन्जालेज | | iOS 14
पछिल्लो WWDC एप्पलमा आईपोजोसमा आफ्नो ध्यान लगभग सयौं प्रतिशत केन्द्रित गरेको छ। यो तार्किक थियो। यो केहि नयाँ थियो, केहि विघटनकारी र विघटनकारी जुन हामी प्रयोग गर्दै थियौं। जे होस्, एप्पल च्याम्बरमा बुलेटहरूको बाहिर चलिरहेको छ यसका दर्शकहरूलाई वाह सुविधाहरू वा नयाँ उत्पादनहरू बिना नै। हुनसक्छ यो पालो हो पुन: बिक्री आईओएस र आफ्नो आईडीभिसिस को संसाधन अधिकतम तिनीहरूको अपरेटिंग प्रणाली को उपयोग को लागी। एक विकल्प एक वास्तविक सफलता दिन को लागी हुन सक्छ आईओएस १ in मा आईफोन मल्टिटास्किंग पुनः सक्षम गर्नुहोस्, आईओएस its मा यसको पहिलो उपस्थितिको १० वर्ष पछि।
आईओएस from बाट आईओएस १ to मा मल्टिटास्कि, के हामी छिट्टै परिवर्तनहरू देख्नेछौं?
एप्पल को संसार मा एक सबै भन्दा सान्दर्भिक परिवर्तन आईओएस of को आगमन थियो। यो पहिलो पटक हो कि हामीलाई नाम थाहा थियो आईओएस ठूलो एप्पलको स्मार्टफोनहरूको अपरेटिंग प्रणालीमा सन्दर्भ गर्न। यो नाम आईफोन ओएसको रूपमा परिचित भयो। जे होस्, नाम अपडेटमा सबै नयाँ समावेश गरिएको थिएन। पहिलो पटक मलाई थाहा छ वास्तविक मल्टिटास्किंग प्रस्तुत गर्नुभयो। एक अनिश्चित मल्टीटास्कर, भयानक र प्रभावकारी हामीसँग अहिलेको तुलनामा छ, तर त्यस समयमा यो त्यस्तो कुरा थियो जुन अघि र पछिको रूपमा चिन्ह लगाइएको थियो। जस्तै फेसटाइमको आगमन वा आफ्नै छविहरूका साथ वालपेपरलाई अनुकूलित गर्ने सम्भावना।
१० बर्ष पछि आईफोनको मल्टिटास्किंगका धेरै आलोचकहरू छन्। करीव सात इन्च स्क्रिनको साथ, आईफोनले मात्र अनुमति दिन्छ अनुप्रयोगहरू परिवर्तन गर्नुहोस् जब उनीहरूको गतिविधि कायम राख्छन् पृष्ठभूमिमा। त्यो मात्र। अरू केहि हैन। त्यसकारण प्रयोगकर्ताहरूको एक ठूलो हिस्सा एप्पललाई बृद्धि गर्न परिवर्तनको लागि अनुरोध गर्दछ एउटा उपकरण यो बढी उपयोगी हुनुपर्दछ। यदि हामी यसलाई आईप्याडसँग तुलना गर्छौं, यद्यपि यसको ठूलो स्क्रिन छ, त्यहाँ धेरै अधिक प्रकार्यहरू छन्: स्प्लिट भ्यू, स्क्रिनमा स्क्रिन, इत्यादि।
धेरै अवधारणाहरू पहिलेदेखि नै आईओएस १ towards को साथ मोड्दै छन् पृष्ठभूमि गतिविधि सम्बन्धित नयाँ सुविधाहरू। यद्यपि, त्यहाँ कुनै अफवा वा संकेत छैन कि एप्पलले यी मूल आईप्याड सुविधाहरू आईफोनहरूमा ल्याउनमा काम गरिरहेको छ। र यो गल्ती हुन सक्छ: नयाँ आईफोनहरूको क्रूर क्षमताको फाइदा लिने र तिनीहरूलाई ऐतिहासिक सम्मेलनको लागि सीमित नगर्ने कि आईफोनले एक पटकमा पर्दामा एक भन्दा बढी चीजहरू गर्न सक्षम हुनुपर्दैन। हुनसक्छ यो सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने र अपरेटि system प्रणालीको शोषण गर्ने अनुमति दिन र जुन 10 गते १० वर्ष पुरानो फंक्शन हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 14 » के हामी आईओएस १ in मा आईफोनका लागि पुन: डिजाइन मल्टिटास्किंग देख्नेछौं?
यसलाई अझ राम्रोसँग काम गर्नको लागि WhatsApp सफा गर्ने तरिका